67 Ha Avaratra Nirehitra tampoka ilay fiara
Fiara iray BMW X5 no nirehitra tampoka omaly atoandro teny amin’ny 67 ha avaratra raha iny avy nodiovina nosasana tsara iny.
Herinaratry ny Jirama Manimba zavatra maro
Mba tsy hilazana hoe manimba fiainam-bahoaka mihitsy dia aleo tsorina amin’ny hoe manimba zavatra maro ity tsy fahatomombanan’ny orinasa Jiro sy rano Malagasy ity.
Fitoroana heloka an’habaka Azo atao no manantona zandarimaria avy hatrany
Tonga nizara ny fahaiza-manaony sy ny zavatra hitany sy ireo efa nampiharina hatrizay ny iraky ny Foibem-pibaikoana ny Zandarimaria sampana Ady amin'ny fandikan-dalàna an’habaka (Service des luttes contre la cybercriminalité)
Mponina eny Ivato Mifoha amin’ny 12 ora alina haka rano
Tena mijaly rano fisotro madio ny mponina eny Ivato na dia izy aza no vavahadin’Antananarivo mifandray amin’ireo tanana manodidina. Mifoha amin’ny 12 ora alina isan’andro mantsy ny mponina mandeha milaha-drano eny amin’ny paompy.
Manarintsoa Atsinanana Trano 200 may kila, 700 no traboina
Nitrangana haintrano goavana teo amin'ny Fokontany Manarintsoa Atsinanana, ao anatin'ny Boriboritany voalohany ny sabotsy 24 oktobra 2020. Atoandro be nanahary no nanomboka ny afo, niainga tamina trano hazo iray noho ny fandrehetana fatana saribao tany ambony rihana raha ny fitantaran’ny mponina teny an-toerana.
Fanodikodinam-bolan’ny ORTM Nohadihadiana koa ireo talen` ny TVM sy RNM teo aloha
Raha notazomina am-ponja vonjimaika ao Antanimora nanomboka ny zoma lasa teo ny tale jeneralin` ny ORTM teo aloha, Johary Ravoajanahary, noho ny fanodinkodinam-bola tao anatin’ireny fifidianana filoham-pirenena tamin’ny 2018, izay anejehana azy,
Tapitra ny dia an-tongotra lavareny Hianatra amin’izay ireo zanak’i Zoto
Naharitra ora 1 mahery kely ny fihaonan’izy ireo nefa dia tsy nisy fanambarana nivoaka taorian’izany fa io izy maika ny hamonjy lanonana io. Somary nandosindositra “micro” an’ny mpanao gazety ihany koa ireo mpikambana ao amin’ny SMM nihaona taminy fa ny filoha lefiny, Atoa Clément Jaona, no nanamarika tamin’ny mpanao gazety fa fampahatsiahivana tamin’Atoa praiministra ny zavatra nambarany mikasika an-dry zareo SMM no fototry ny dia nalehan-dry zareo tao amin’ity tompon’andraiki-panjakana ity. Nambaran’ity filoha lefitry ny SMM ity fa toherin-dry zareo marin-drano ny filazan’ity praiministra ity fa manao “destabilisation” na fanakorontanam-panjakana izy ireo. Nampahatsiahivinay azy koa ny teniny nilaza fa : “tapitra hatreo ny fanaovana fitaovana politika ny fitsarana”. Mbola nambaranay tamin’ity praiministra Malagasy ity koa, hoy Atoa Clément Jaona, tokony handray andraikitra (prend acte) amin’ny fanatanterahana didy navoakan’ny fitsarana izy. Efa mazava amin’ny rehetra kosa ny fitakiana ataonay izay miompana amin’ny tokony hampiarana amin’izay ny fahaleovan-tenan’ny fitsarana eto amintsika.